Baqattoonni Itoophiyaa Sudaan Kaartum jiraatan rakkoo hamtuu keessa jiraachuu himatan - BBC News Afaan Oromoo
Baqattoonni Itoophiyaa Sudaan Kaartum jiraatan rakkoo hamtuu keessa jiraachuu himatan
27 Guraandhala 2021
Madda suuraa, Kumarraa
Baqattoota Itoophiyaa Sudaan magaalaa kaartum qarqaratti gatamuu himatan
Baqattoonni Itoophiyaa Sudaan magaalaa Kaartum jiraatan maallaqa qabaniin boba'aafi daabboollee bitachuu dhorkamuun rakkoo keessa jiraachuu himatu.
Namoonni BBCn dubbise akka himanitti, karaa Dhaabbata Mootummoota Gamtoomaniitti Ejensiin Dhimma Baqattootaa (UNHRC) baqataa ta'uun beekamtii argatanii waggoota dheeraa magaalicha jiraachaa turanis gama dhaabbatichaatiinis ta'e mootummaa Sudaaniin eegumsi gahaan nuuf hin godhamne jedhu.
Itoophiyaafi Sudaan gidduutti walitti bu'insi daangaa erga uumameen as ammoo sodaafi yaaddoo guddaa keessa galanii akka jiran himan.
Gaaffii keenyaaf deebii ga'aa hin arganne jechuun mooraa UNHCR jala gara ji'a sadiif erga jiraatanii konkolaataan fe'amanii magaalaa baafamuun bakka balfi magaalaa Kaartum gatamutti gatamuu isaanii dubbatu baqattoonni kunneen.
Imbaasiin Itoophiyaa Kaartum jiru yaaddoo baqattoonni qaban akka quba qabu himuun, baqattoota Itoophiyaa irratti addatti karaa mootummaa biyyichaan beekamee dararaan gahuu baatus keessa keessa miidhaan akka dhaqqabaa jiru beekna jedhe.
Imbaasii Itoophiyaa Kaartum jirutti Itti-gaafatamaa Dhimma Daayaspooraa Oobbo Mikaa'el Xoobiyaas BBCtti akka himanitti, baqattoota Itoophiyaa magaalaa Kaartum keessatti tajaajila geejjibaa baajaajiin kennan hojiirra dhorkamuun baajaajiin isaanii harkaa fuudhamee ture.
Rakkoo baqattoota Itoophiyaa magaalicha jiraatan irra gahu mootummaa biyyattiiti beeksisuun akka furmaata argatuuf hojjechaa jiraachuus Obbo Mikaa'el himaniiru.
Irra dedeebiin gaaffii dhiyeessaa turaniinis baajaajii baqattoota Itoophiyaa jalaa fudhatanii turan gariin akka deebisaa turan, garuu ammoo tajaajilicha akka itti fufuu hin dandeenye gochuu isaanii himan.
Poolisiin biyyattiis sarbama mirga namoomaa baqattoota kanneen irra akka geesisan himuun, akka ija jabinaan hin falmineef baay'een isaanii karaa seeraan alaa biyyicha kan galanidha jedhan.
UNHCR lammiilee Itoophiyaa Sudaanitti baqatan bakka haaraa qubsiisuu eegale
Looltooti Itoophiyaa baqattoota daangaa Sudaan irratti dhorkuun himame
UN baqattoota Tigraayiif qaqqabuuf karaan akka banamu gaafate
Kabajni mirga namoomaafi adeemsi murtii haqaa biyyattii dadhabaa waan taheef ragaafi jecha poolisiin kennen qofa manni murtiis murtii dabarsaa akka ture himu.
Haala kanaan, namoonni baay'een akka biyyaa baafaman ta'aniirus jedhan.
"Ji'oota lamaan darban keessa qofa bifa kanaan namoota 220 ta'an qabanii gara biyyaatti deebifamaniiru. Namoota kaan ammoo eeyyama malee hojjeetta jechuun poolisiin adabaa ture."
Obbo Mikaa'el akka jedhanitti, baqattoonni Itoophiyaas ta'an kaan gaafa qabaman halli mana hidhaa isaanii, tajaajila fayyaafi nyaataa rakkoo hamaadha.
Lammileen Itoophiyaa Sudaan, Kaartum jiraatan BBCn dubbises rakkoo isaan mudachaa jiru kanaan dubartoonniifi ijoolleen caalaan daran rakkachaa jiraachuu himu.
Baqattoonni kunneen waraqaa guutuu baqataa osooma qabaatanii jiranii dararaan irra gahuu dubbatu. Gadi bahanii yeroo deeman poolisii biyyattiin dhaanamuufi hidhamuun akka isaan mudatus ibsu.
Haadha ijoollee afurii kan ta'an Aadde Kuulanii Bayyanaa waggoota 28 darbaniif Sudaan magaalaa Kaartum jiraachaa turan.
Rakkoo siyaasaa Itoophiyaa keessa tureen humnoota nageenyaa mootummaan haadhaafi abbaa isaanii jalaa ajjeefamuu hordofee isaanis lubbuu isaaniif baqatanii namoota baay'ee waliin akka biyyaa baqan dubbatu.
UNHCR jalatti galmaa'anii baqattuu ta'uun beekamtiin kennamuufillee amma rakkina hamaa keessa jiraachuu himu, Aadde Kuulaniin.
Aadde Kuulaniin erga rakkoon dhimma daangaa Itoophiyaafi Sudaan dhaga'ameen as ari'atamni isaanirra ga'u dabaleera jedhan. "Habash jedhanii yeroo nu ari'anii mana namaa jala gallee lubbuudhaan jalaa baane jirra. Guuyyama sadii durallee akkas taheera,'' jechuun waan isaan mudate dubbatu.
Haadholii daa'ima qabatanii konteenere nama dhuunfaa keessa jiran
Namoota magaalaan ala geeffamuun rakkachaa jiran BBCn dubbise biroo keessaa haadha ijoollee torbaa Aadde Yashii Kabbadaati.
Ijoollee umuriin isaanii waggaa 1-12 gidduu ta'an torba qabatnii rakkachaa akka jiran Aadde Yashiin, ijoolleen isaanii xumuraa lakkuu waggaa tokkoofi ji'a torbaadha jedhu.
"Ijoollee qabadheen karaarratti rakkachaa jira. Abbaa warraakoo qofatu hojjeta. Waan itti ijoollee guddisnu dhabnees rakkachaa jirra," jedhan.
Obbo Yohaannis Samaa'ul waggoota ja'aaf mooraa baqattootaa Baha Sudaan Kasalaa keessa erga turanii booda gara Kaartum galanii ulaagaa baqataa guutuun waggoota dheeraaf jiraatanis mirgi isaanii sarbamaa jiraachuu himu.
Sudaan keessa baqattoonni waggaa 15 ol jiraatan baayyee akka ta'an kan himan Obbo Yohaannis, carraan biyya sadaffaa akka kennamuuf, yookaan ammoo akka lammii biyya sanaatti mirgisaanii akka kabajamuuf gaafachaa turuu dubbatu. Kunis ta'uu baannaan Waldaa Qaxxamura Diimaan biyya keenyatti nu deebisaa jennee gaafanneeras jedhan.
UNHCR ammoo, 'inni gargaaramaa jiru gargaaramaa jira. Tajaajila fayyaafi barnootaa warri barbaadaan argachaa jiru. Kanaan ala gargaarsi isinii goonu hin jiru asii deemaa,' nuun jedhe jedhan Obbo Yohaannis.
Baqattoonni baay'een deebii kanatti mufachuun hanga deebii gahaa arganutti asii hin deemnu jechuun mooraa dhaabbatichaa jala gara ji'a sadii turuu himan.
''Halkan poolisoonni dhufanii konkolaataa baay'eedhaan fuudhanii magaalaa baasanii baka kosii ykn balfi magaalaa Kaartum gatamutti nu gatanii deebi'an," jedhu.
Yeroo ammaa kana bakka jiraatanillee dhabanii konteenara nama dhuunfaa argatanii keessa jiraachaa akka jiran ibsu Obbo Yohaannis.
Itoophiyaa dabalatee baqattoota biyyoota ja'aa akka baasanii bakkichatti gatan himan Obbo Yohaannis.
Ummanni Sudaanis baqataa arguu hin barbaadan; 'nurraa baasaa' jedhu jechuun dubbatu Obbo Yohaannis.
"Hiriira daabboo bitachuu keessaa nu ari'aa jiru. Gaazii nutti hin gurguran. Erga walitti bu'insa daangaa uumamee ammoo konkolaataa keessas nu buusuu."
Akka baqattoonni kunneen jedhanitti, gaaffiin isaanii ijoon mirgisaanii akka kabajamuufi carraa biyya 3ffaa akka kennamuuf kan jedhudha.
Sudaan kanneen seeraan ala biyyakoo galtan jettu kaan hidhuun, kaan ammoo biyyatti deebisaa akka jirtu gama Imbaasii Itoophiyaa Kaartuum jiruun hubatameera.
Yaaddoon baqattoota Itoophiyaa dhiyeenya dabalaa jiraachuuf waan lama akka sababaatti kaasu Itti-gaafatamaan dhimma Daayaspooraa Oobbo Mikaa'el.
Kan jalqabaa, dinagdeen biyyattii akka malee gadi bu'uu yoo ta'u daabboofi gaaziin dhiyaatu hanqina guddaa qaba jedhan.
Kana irraa kan ka'e, lammiileen biyyattii 'baqattootatu hojii keenya nurraa fudhate' jechuun akka morman himu.
Gama biraan, walitti bu'insa daangaa Itoophiyaafi Sudaan yoo ta'u, 'Achii daangaa irratti namoota keenya ajjeestu, asiimmoo daabboo keenya nu saamtanii nyaattu' jechuun dhiibba taasisaa akka jiran dhageenya jedhan Obbo Mikaa'el.
Torbanitti yoo xiqqaate baqattoonni hanga awutoobisii kudhanii ta'an karaa Matammaa gara biyyaatti deebi'aa jiraachus himuun, baqattoota UNHCR jalatti galmaa'anii jiran gara Imbaasii waan hin deemneef gargaaruu akka hin dandeenyes hubachiisaniiru Obbo Mikaa'el.
Garuu lammiilee keenya waan ta'aniif mirgi isaanii akka kabajamu mootummaa biyyattii hubachiisaa turreera jedhan.
Komii baqattootaa kana irratti dhaabbatni UNHCR maal jedha jennee gaafachuuf yeroo hedduu irra dedeebin bilbillus nuuf deebisuu hin dandeenye. Karaa email' gaaffiiwan kannen ergineefis deebii nuuf hin kennine.
Lola Tigraay: Looltooti Itoophiyaa baqattoota daangaa Sudaan irratti dhorkuun himame
6 Amajjii 2021
Lola Tigraay: UNHCR baqattoota Tigraayiif qaqqabuuf karaan akka banamu gaafate
18 Sadaasa 2020
''Baqattoota galuuf fedha qaban gara biyyaa deebisaa jirra'' Ambaasaaddar Diinaa Muftii
6 Guraandhala 2020